National Nkwado na-ahazi | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Otu achinglọ Akwụkwọ Nkụzi -lọ Akwụkwọ > National Nkwado na-ahazi
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ nkwado na mba niile na mpaghara Barnet - edepụtara n'okpuru bụ ndị nne na nna na ndị nlekọta kacha baa uru. Ọ bụ ezie na anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na njikọ ndị a ziri ezi, ruo n'oge ma dị mkpa, Olọ Akwụkwọ Oakleigh enweghị ike ibu ọrụ maka ibe ndị na-eweta mpụga.
Tọrọ ntọala na 2001, Ụbụrụ bụ ọrụ ebere mba pụrụ iche nke na-agba mbọ imeziwanye ndụ ụmụaka nke nwere ọnọdụ akwara ozi, site na nyocha, ozi na nkwado, na-aga n'ihu. Ha raara onwe ha nye inyere ezinụlọ nwere ụmụaka nwere ụbụrụ ụbụrụ aka ịchọpụta ezigbo ndụ ọnụ.
Kpọtụrụ bụ ọrụ ebere maka ezinụlọ nwere ụmụaka nwere nkwarụ. Ha na-enye ọtụtụ ndụmọdụ na ozi gbasara okwu dịka mmepe nwatakịrị, nri na akparamàgwà, yana ozi gbasara ọrụ mpaghara na ụzọ ị ga-esi zute ezinụlọ ndị ọzọ dịka nke gị. Ha nwekwara ozi banyere agụmakwụkwọ, okwu gbasara ego na ọrụ ahụike ..
Gaa na Kọntaktị
Kansụl maka Dismụaka Nkwarụ (CDC) bụ nche anwụ maka ngalaba ụmụaka nwere nkwarụ na England, nwere njikọ na mba UK ndị ọzọ. Ha bụ naanị otu mba na-achịkọta ọtụtụ nzukọ dị iche iche na-arụ ọrụ na maka ụmụaka nwere nkwarụ iji kwado mmepe na mmejuputa iwu na omume. Ọrụ ha metụtara ụmụ nwere nkwarụ 800,000 na ezinụlọ ha.
Gaa Leta Council for Disabled .mụaka
'Stù Ọrịa Ọrịa Down bụ ọrụ ebere na-akwado ndị nwere nsogbu Down iji bie ndụ zuru oke ma na-akwụghachi ụgwọ. N'ebe a, ị ga-achọta azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị anyị banyere ọrịa Down's syndrome. Ihe omuma a gha enyere gi aka ikewaputa ihe ndi bu eziokwu na ndi ozo.
Gaa na Association nke Ọrịa Down
Ego Ezinaụlọ bụ ọrụ ebere nke na-enyere ezinụlọ n'ofe UK aka bụ ndị na-azụlite nwata nwere nkwarụ ma ọ bụ ọrịa siri ike ma ọ bụ onye na-eto eto dị afọ 17 ma ọ bụ n'okpuru ma biri na England, Northern Ireland, Scotland ma ọ bụ Wales. Needkwesịrị ibi na UK maka ọnwa 6 ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ọnwa atọ ma ọ bụrụ na nwa gị erubeghị ọnwa isii ma ị tozuru maka ego ọha
Gaa Leta Ego Ezinaụlọ
olileanya na bụ ọrụ ebere enyere iji kwado ezinụlọ na ụmụaka nwere Epilepsy. Akwụkwụ na-adọ nwere ike ibibi ezinaụlọ. HOPE London na-enye ebe nchekwa maka ezinụlọ iji na-emekọrịta ihe, belata nkewapụ na iwulite mmekọrịta. Nakwa ịkekọrịta ozi, Olileanya Maka Ọrịa edimụaka Ọrịa :mụaka: London na-enye ohere maka nkwado na nduzi na nke kachasị mkpa ka ụmụaka nwee obi ụtọ!
Gaa Leta Hope London
Enwere m ike bụ ọrụ nkwukọrịta ụmụaka. Ha nwere mmemme na ọrụ dị iche iche dị na UK niile, maka ndị nne na nna, ndị na-eme ọrụ na ụmụaka nwere nsogbu ikwu okwu na asụsụ.
Ha nwere akara ekwentị ebe ị nwere ike ịgwa ndị ọkachamara okwu na ndị asụsụ okwu maka ndụmọdụ na nduzi yana ọtụtụ akụrụngwa.
Gaa na M Pụrụ
At Mmuta Learningmụta Taa ị ga - ahụ ozi na echiche kachasị ọhụrụ na nkwarụ mmụta, vidiyo na nhọrọ nke isiokwu kachasị mma site na mbipụta mbipụta nke Disability Disability Today. Ọzọkwa, enwere ebe a na-ere akwụkwọ na ọrụ.
Gaa Leta Learningmụta Nkwarụ Taa
Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta nke nwatakịrị nwere nkwarụ, ma ọ bụ ọkachamara ahụike na-achọ echiche, ndụmọdụ na ozi gbasara ngwa ndụ ụbọchị niile. Ibi ndụ dịịrị ụmụaka mfe weebụsaịtị bụ ihe magburu onwe ya ị pụrụ ịtụkwasị obi.
Gaa Leta ndụ dịịrị ụmụaka mfe
Mencap bụ ọrụ ebere UK maka ndị nwere nsogbu mmụta. Ha na-akwado ezinụlọ ha na ndị nlekọta ha. Chọpụta ihe banyere ọrụ anyị ma tinye aka.
Otu National Autistic Society bụ British Charity maka autistic ndị ezinụlọ ha. Ha nwere akara enyemaka, ngalaba mpaghara, akwụkwọ ndekọ aha ọrụ, enye ọzụzụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Gaa na National Autistic Society
Ndụ ohuru bụ ọrụ ebere nke na-akwado ezinụlọ nwere ụmụaka nwere nkwarụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa. Karịsịa, ha nwere ozi ekwentị na ndụmọdụ ndụmọdụ, ha na-enye onyinye iji nyere ezinụlọ aka ịzụta akụrụngwa ọkachamara, ma nwee pọdsị ụmụaka ji egwu egwu, nke dị maka mgbazinye ego maka ọnwa 3 n'otu oge. Ọtụtụ ezinụlọ enweela obi ụtọ na pọd ahụ ụmụaka egwuri egwu dịka ọ na-enye ọtụtụ ihe ụmụaka na-akpali akpali afọ kwesịrị ekwesị ihe egwuregwu ụmụaka ka ezinụlọ wee ghara ịzụ ha.
Egwurugwu Trust na-akwado ezinụlọ ndị nwere nwatakịrị gbara afọ 0-18 ruo ọtụtụ afọ na-eyi ndụ egwu ma ọ bụ ọrịa na-enweghị atụ ma chọọ nkwado nkwado anyị na-enye. Ha na-akwado ezinụlọ ndị a nwere nwatakịrị nwere egwu ndụ ma ọ bụ ọrịa na-egbu egbu ma bụrụ ndị kachasị mkpa. Ndị ọrụ ha na-enyere ndị ezinụlọ aka na-enye ezinụlọ ndị a ndụ na ụmụaka.
Gaa Leta Obi Trusttọ
AHOP bụ nkwarụ nkwarụ nkwarụ na England na Wales. Ọ na-enye ihe ọmụma bara uru na nkwado mmetụta uche. Ha nwere akara enyemaka nke na-enye ndụmọdụ onwe ha n'efu na adịghị ele mmadụ anya n'ihu na nsogbu dịka uru, nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ụlọ na mmezigharị ụlọ.
Gaa na SCOPE
Anụmanụ dị iji kwado ndị tolitere ma ọ bụ tolite na nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị nwere nkwarụ. Ọ bụ naanị ọrụ ebere UK na-anọchite anya mkpa nke ihe karịrị ọkara nde ụmụnne na-eto eto na ihe karịrị otu nde na ọkara ndị toro eto.
Na Sibs anyị na-agba ọsọ Smụaka - Ọrụ nkwado ntanetị n'ịntanetị maka ụmụnne n'okpuru 18 nke nwere nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị nwere nkwarụ ma ọ bụ nwee mkpa ndị ọzọ.
Gaa na SIBS
Specialmụaka pụrụ iche na UK bụ ọrụ ebere maka ezinụlọ nwere nwa nke afọ ọ bụla nwere mkpa pụrụ iche. Ebumnuche ha bụ ime ka ezinụlọ dịrị n'otu maka ọbụbụenyi, ịkekọrịta ozi na ịkwado ibe ha.
Gaa Leta Specialmụaka Pụrụ Iche na UK
SWAN UK (ọrịa ndị na-enweghị aha) bụ naanị nkwado nkwado raara nye maka ezinụlọ nke ụmụaka na ndị na-eto eto nwere ọnọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-amaghị na UK. Ọ bụ ọrụ ebere na-agba ya Njikọ mkpụrụ ndụ ihe nketa UK.
Gaa na Swan UK